PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - INKOLO NESINTU KAKUXABENE KUQHATHWA YITHI
INKOLO NESINTU KAKUXABENE KUQHATHWA YITHI
Ilanga - 2017-10-05 - Imibond - Makhosi Bonakele (Ndleleni) Zondo Insika yaMathiyane Uthishanhloko waseMatatane Secondary School mthiyanesgs@yahoo.com 082 752 7342
KUNINGI okuthanda ukuba yindida kubantu bakithi e-Afrika, ikakhulukazi eNingizimu Afrika, mayelana nokukholwa nokugcina izinto zesintu. Ngokubuka kwami lokhu kudideka sekuze kwenza abanye abantu bahambela kude nesiko lesintu, beqhakambisa kakhulu inkolo sengathi uma wenza okwesintu kawukholwa kanti cha eqinisweni inkolo nesiko kakuxabene, kuxatshaniswa yithina ngakho belu ukudideka esinakho.
Umuzi nomuzi unezindlela zawo zokwenza izinto, njengokuthi uma kuzelwe umntwana kuba nokuthile okwenziwayo emzini othile okungafani nokwenziwa komunye. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma kuzoba nomshado, nakhona kuba nendlela eyehlukile okwenziwa ngayo kusukela kusafika abakhongi beyocela isihlobo esihle, kuze kube kufike ilanga lomgcagco.
Kusuke kunezindlela zakulowo muzi okwenziwa ngazo eziyinqubo yalelo khaya ehlukile kuneyakomunye umuzi. Nangozikwenkolo futhi ngokwehlukana kwazo, kunezinto ezenziwa enkolweni yesintu ezingenziwa kweyobuKrestu. Lokhu kakusho ukuthi kukhona okholwa kancane nosekholwa kakhulu ngoba ekholwa enkolweni ethile. Kuye kungiphathe kabuhlungu ukubona abantu bebanga inkolo baze bangangenelani ngisho nokungenelana.
Ngibona ukuthi okuyisona sizathu esenza abantu bagcine sebenokungezwani okuthinta inkolo nesiko noma imikhuba yekhaya, wukuthi basuke basebenzise inkolo nalapho ingafanele ukungena khona. Uma sihlangene nje singaMathiyane, siyokhuluma, siyogubha isiko elithile noma siyokwenza imikhuba yakithi, uzwa elinye ilunga lomndeni selithi:
“Mina kangizihlanganisi nalezi zinto zenu sengiyakholwa”. Ngidideke-ke ukuthi kanti ukukholwa kunjani, kushintsha umuntu isibongo angabe esaba ngowalapho ezalwa khona futhi angabe esakwazi nanokuhlanganyela nomndeni wakhe enze izinto ezenziwa kubo. Wukukholwa kuni lokhu osekwenza umndeni ubukeleke phansi kube kuyiwona oyimpande nensika yobukhona bomuntu?
Ngibona kumele siyilungise le nto ngoba yiyona enomthelela wokuba sigcine siyisizwe esingazazi kahle ukuthi singobani, sidabukaphi futhi siyaphi. Okunye okwenezela kulokhu kudideka, yimfundo. Uthola umuntu esehlanganise imfundo yakhe nenkolo bese ebeka ubuyena bokuba ngumuntu eceleni noma le emuva, eseqhakambisa iziqu zakhe nenkolo phambili. Omunye uze umthole eseqhakambisa nemithetho yebandla kakhulu ekhaya ukwedlula leyo yasekhaya.
Okubuhlungu kakhulu kulezi zenzo zethu, wukuthi izingane zethu zisuke zibuka futhi zifunda, bese nazo zikhula nalokhu kudideka. Phela iqiniso lithi ngaphambi kokuba ube yikholwa enkolweni nasebandleni elithile, uqale ube ngowasesibongweni nasemndenini othile, okuyikhona okukuphe umnyombo weqiniso ngobuwena, imvelaphi nobuzwe bakho.
Okuyaye kuhlekise sakudumaza, uyaye ubone umuntu engasafuni ngisho nokubukela kumabonakude, alalele emsakazweni noma afunde ephepheni nasezincwadini ngezinto zesintu. Uzomuzwa ethi:
“Kangifuni nokuzwa ngalezi zinto ngoba kangihlangene nazo.” Namanje ngisasho, inkolo nesintu noma nesiko lobuwena kakuxabani - kuxatshaniswa yithina. Ngendlela lokhu kudideka osekujule ngayo, uzwa umuntu uma ebona omunye egqoke wahloba mhlawumbe ngobuhlalu noma ngezinye izinto zesintu, kuthiwe lokho kuhloba kakungeni ebandleni elithile ngoba kuveza ukuthi usuhambisana namasiko.
Ngivele ngidideke ukuthi lokho sekuyiphazamisaphi inkolo. Ngisanda kuncoma omunye umakoti osemncane sibonana ndawanathize egqoke ingubo enhle ehlotshiswe ngobuhlalu, usethi kimina:
“Uma enkonzweni bengangibona abaphathi bangangithethisa, kasivumelekile ukugqoka noma sihlobe ngezinto zesintu.” Ingiphathe kabi le nkulumo ngoba ingenze ngabona ukuthi inkolo iyaxatshaniswa impela nje nalokhu okuyingqikithi yobuthina.
Ake siyifakele izibuko indaba yenkolo nesintu sethu, singathatheki size silibale ukuthi sinemvelaphi yethu ngaphambi kokuba sibe amakholwa. Masingakhohlwa futhi ukuthi yona le nkolo yafika kanjani kuleli lizwe lethu nokuthi yasetshenziswa kanjani ukuba idunge izingqondo zokhokho bethu yaze yadlulela nasezizukulwaneni eziyithina. Ngakho masingayivumeli ukuba ibe ngaphezu kobuthina ngoba lokho kuyoqhubeka nokusilimaza njengesizwe.
Zinqunywa amakhanda ziyekwe nina bakaMalandela.